ခရီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဦး တည်ရာ၊ လေယာဉ်၊ ဟိုတယ်၊ ရွေးချယ်စရာများစွာကိုရွေးချယ်ပြီးသင့်အနေဖြင့်အဆင်မပြေစေရန်သင်ရွေးချယ်ရမည်။ ဤအရာအားလုံးကိုအလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုထည့်သွင်းရမည်။ အကယ်၍ ခရီးစဉ်အတွင်းဝေးလံသောဒေသများသို့သွားရန်သို့မဟုတ်မတူညီသောမြို့များသို့သွားရန်လိုအပ်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဤကိစ္စများတွင်အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးအလွယ်ဆုံးမှာအများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပထမတစ်ချက်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသောအရာများထက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုအဆင်မပြေမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခံနေရသောကြောင့်ဤအခြေအနေကြောင့်ခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာအလွန်မြင့်မားနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ကိုသင်နှင့်အတူယူရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။
ဤမေးခွန်း၏အဖြေမှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကားငှားရမ်းခြင်း။ ဒီကားအမျိုးအစားကိုကြောက်စရာမလိုဘဲအကောင်းဆုံးခရီးစဉ်လိုချင်တဲ့သုံးစွဲသူတွေပိုပိုပြီးတောင်းဆိုလာတယ်။ ဒါဟာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိမထားမိသေးသောလူများစွာအတွက်ယနေ့ကားငှားခြင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအတွေးမဟုတ်ပါ။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ် လွတ်လပ်ရေး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ချင်သလောက်ရွေ့လျားစိတ်ကူးတစ်ခုခုပါပဲ။ ဒီကောင်လေးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ဘတ်စ်ကားဘယ်တော့ထွက်မလဲ။ မြေအောက်ရထားဘယ်မှာသွားရမလဲ။ စသည်ဖြင့်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။
ဒုတိယ၊ သက်သာခြင်း။ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်လူအပြည့်ရှိသောမက်ထရိုမီတာတစ်ခုတွင်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးသိုလှောင်ထားခြင်းသည်ခရီးတစ်ခုလုံးနှင့်အတူတူပင်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆန္ဒရှိသည့်နေရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့၊ ကားငှားမယ်ဆိုရင်၊ ဒီအခြေအနေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ။
နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုသံသယမရှိဘဲ, အဖြစ်ပါတယ် ချွေတာ။ ကားငှားမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ကိုယူရို ၅-၁၅ လောက်ကုန်တယ်၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ တက္ကစီတွေ၊ တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကိုပြောင်းဖို့လိုတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်အများကြီးနည်းတယ်။
ကားငှားရမ်းခြင်း၏အားသာချက်များကိုသာဖော်ပြခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ၊ များစွာသောအရာများစွာရှိကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်အချိန်မရွေးရှာဖွေခြင်းကိုအချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပါကဤကွန်ယက်သည်ဤကဏ္ to ကိုရည်စူးထားသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့မှသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်လုံးလုံးလျားလျားအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် အွန်လိုင်း။
ငါတို့လည်းလူသိများတယ် ရှာမယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဤရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးများကိုပြသရန်ကမ်းလှမ်းမှုများကြားတွားသွားသည်။
ကျနော်တို့ကိုပြသထင်ရှားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲမှာ ဘတ်ဂျက် y ကြည့်ရှုခြင်း။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းသည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာတလွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၂၈ နိုင်ငံတွင်ရုံးခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ Avis ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည့်အမျိုးအစားများနှင့်အခြေအနေများအားလုံး၏ကျယ်ပြန့်သည့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်အွန်လိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲမထွက်ခွာနိုင်ပါ လှေစီးနေသည်ပြည်သူလူထုအများစု၏ထိရောက်မှုနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်စာနာမှုကိုနှစ်သက်စေသော ဦး ဆောင်မိုဘိုင်း application တစ်ခု။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Un အွန်လိုင်းကားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အလွယ်ကူဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးပြုရန်။ ထို့အပြင်ဤစနစ်အားလုံးနီးပါးသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ် ကျနော်တို့မော်တော်ယာဉ်ကောက်ချင်ဘယ်မှာနေရာ။ ပြီးနောက် စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပေးပို့၏ရက်စွဲများ အတူတူ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ပြီးပါပြီ ကားအသွင်အပြင် သူ့ဟာသူ: အမျိုးအစား, မော်ဒယ်, etc
ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုပေးရသည်။ သို့သော်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ကားတစ်စီးအားခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိဘဲငှားရမ်းခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါးဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်ယင်းတို့နှင့်အလွန်ရင်းနှီးမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ငွေသားပေးချေမှု.
ဒီအကြောင်းပြချက်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးသည်စျေးကြီးပြီးထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်သေချာသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ဟာတစ်မျိုးမျိုးကိုဖန်တီးတယ် အာမခံ အရာကားငှားရမ်းခြင်း၏ကန ဦး စျေးနှုန်းမှဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
ဤအာမခံသည်အသုံးပြုသူမှသာဤပြသနာသည်ယာဉ်တွင်ပြbeနာဖြစ်စေသည်။ ဤအတောအတွင်းသူတို့အဖြစ်လူသိများသည်အရာ၌စောင့်နေကြဆဲဖြစ်သည် အပျငှေကတ်တွင်ရှိသည့်စုစုပေါင်းငွေပမာဏ၏ကန ဦး ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဘာမျှမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကားကိုပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေတွင်ရောက်ရှိသောအခါလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာကားငှားရမ်းရာတွင်အကြွေးဝယ်ကဒ်များကိုအများအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောနေတာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကပြောင်းလဲနေတယ်၊ ​​ဒီကနေ့ကကားတစ်စီးကိုကားငှားဖို့ဖြစ်နိုင်တယ် ငွေသားပေးချေမှု ဥပမာကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော အော်တိုဥရောပ.
တစ် ဦး ချင်းစီအကြားကားငှားရမ်း
ဒီနေ့ခေတ်မှာအခြားအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုသုံးတဲ့ကုမ္ပဏီသစ်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ရန်နေရာချထားသူများမဟုတ်တော့ဘဲ၎င်းတို့အားဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည် တစ် ဦး ချင်းစီ.
ဆိုလိုသည်မှာမတူညီသောလူတို့သည်အမြတ်ရရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီမှတဆင့်သူတို့၏ကားကိုငှားကြသည်။ ကြော်ငြာတစ်ခုမှတဆင့်သူတို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသောသူများကသူတို့ကိုဆက်သွယ်သည်။ ငှားရမ်းသူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေနှင့်လောင်စာဆီအပြည့်ရှိသည့်ယာဉ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်စုဆောင်းရန်အတွက်တွေ့သည်။
ဤရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်လူသိများသည် 'တစ် ဦး ချင်းစီအကြားကားငှားရမ်းခြင်း'.
နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်ကားကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာငှားရမ်းရန်လိုအပ်ပါက Mercedes သို့မဟုတ်အခြားအထူးအမှတ်တံဆိပ်များငှားရမ်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သူတို့သည်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများကိုပေးသောကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် သက်တမ်းတိုးရန်သို့မဟုတ်တာဝန်မရှိဘဲပြန်ပို့ရန်။